Chautari Daily » अर्थ
काठमाडौं । आज साताको दोस्रो दिन (सोमबार) यूके पाउण्डसहित केही देशको विनिमयदर ओरालो लागेको छ भने अमेरिकी डलरसहित धेरै देशको भाउ स्थिर रहेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ ७७ पैसा तथा बिक्रिदर ११४ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रिदर.....
ह्वात्तै बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ , कुन देशको कति हेर्नुहोस्
काठमाडौं । शुक्रबार अमेरिकी डलरसहित सबै देशको भाउ बढेको छ। नेपाल राष्ट्रबैकंले आजका लागी तोकेको विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११३ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ।साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ। त्यस्तै.....
बढ्यो सबै विदेशी मुद्राको भाउ
काठमाडौं / बिहिबार नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरसहित अन्य देशको मूल्य बढेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ १२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ११३ रुपैयाँ ७२ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ७२ रुपैयाँ ४० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३.....
काठमाडौं । आज अमेरिकी डलरसहित केही देशको मुद्राको भाउ स्थिर रहेको छ भने केही देशको घटबढ भएको छ। नेपाल राष्ट्रबैकंले आजका लागी तोकेको अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११३ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ। त्यस्तै साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ.....
आज विदेशी मुद्राको भाउ हेर्नुहोस् , कुन देशको कति ?
काठमाडौं / आज अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको विनिमयदर बढेको छ । आज यूके पाउण्ड र बहराईन दिनारको भाउ भने घटेको छ। त्यस्तै आज आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११३ रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ।साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको.....
ह्वात्तै घट्यो विदेशी मुद्राको भाउ
काठमाडौं । आज (बिहिबार) अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको भाउ ओरालो लागेको छ । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११३ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रिदर १४६ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ.....
काठमाडौं। आज (बिहीबार) यूके पाउण्डसहित केही देशको भाउ बढेपनि अमेरिकी डलरसहित प्राय देशको मूल्य भने ओरालो लागेको छ । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्रिदर ११४ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रिदर १४६ रुपैयाँ १० पैसा रहेको.....
आज पनि बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ, कुन देशको कति पूग्यो ?
काठमाडौं। आज (बुधबार) पनि अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको भाउ उकालो लागेको छ । अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११४ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रिदर १४५ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ.....
काठमाडौं / पशुपतिनाथ मन्दिरमा करिब ४५ किलो सुन चढाइएको तथ्य फेला परेको छ । यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वर्ष दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा ५६ वर्षको अवधिमा ९ किलो मात्र सुन देखाएको थियो । हालसम्म चढाइएको सुन ९ किलोमात्र भनेर समाचार प्रकाशित भएपछि सर्वत्र विरोध भएको थियो । त्यसपछि संस्कृति, पर्यटन.....
काठमाडौं / आज साताको तेस्रो दिन (मंगलबार) सुनको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । सोमबार ७० हजार एक सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ आज एकैदिन ६ सय रुपैयाँ बढेर ७० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज तेजावी सुनको भाउ पनि उकालो लागेको छ । आज.....
सलोन र अञ्जलीको ‘माया पिरिम’